Neefta - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Tababbarka Caafimaadka > Neefta
Waxbadan ka baro neefta iyo maareynta astaamaha.
Waa maxay Neeftu?
Neeftu waa cudur sambabaha ah oo adkeeya dhaqaaqa iyo soo bixida sanbabadaada, taasoo keenta neefsashada oo adkaata. Astaamaha cudurka neefta waxaa ka mid ah qufac, xiiq, (foori foodda marka aad neefsaneyso), neefta oo ku qabata iyo xabadka oo ku xirma. Xiiqdu waxay saameyn ku yeelan kartaa koox kasta oo da 'yar ilaa iyo waayeel ah. Dad badan ayaa ku dhaca neefta markay yar yihiin. Laakiin dadka waaweyn badanaa neef ayey ku dhacaan nolosha dambe, xitaa 50 ama 60s.
Sideen u maamuli karaa neefta?
Maareynta neefta micnaheedu waa in astaamaha lagu xakameeyo, lagana fogaado waxyaabaha kiciya iyo in la qaato daawooyinka si looga hortago dhacdooyinka haddii ay dhacaan. Adeegso dawadaada waxqabadka degdega ah isla marka aad bilowdo inaad dareento astaamo. Neefta waxay u horseedi kartaa xaalad caafimaad oo degdeg ah. Waa muhiim in la ogaado calaamadaha cudurka neefta ee daran oo loo diyaar garoobo in tallaabo degdeg ah la qaado ama la waco 9-1-1.
Maxaad qaban kartaa?
Kala hadal dhakhtarkaaga sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo calaamadahaaga iyo waxa sababa.
La soco xasaasiyadaha ama waxyaabaha sii xumeyn kara xasaasiyaddaada.
Ogow waxa culeys caafimaad leh adiga kuu yahay.
Ogow xadkaaga oo fiiri astaamaha daal ama neefsashada oo dhib ah marka aad jimicsi sameyneyso.
Qaado neeftaada samatabbixinta markasta.
Iska ilaali xaaladaha hawo xumo ama gaar ahaan meelaha boodhka leh.
Sigaar ha cabin oo ka fogow qiiqa gacanta labaad.
Samee qorshe hawleedka neefta haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah.
Kala hadal daryeelkaaga xiiqda daryeel bixiyahaaga
Fahmaan waxa kiciya neeftaada iyo siyaabaha looga hortago ama loo xaddido soo-gaadhistaada. Waa muhiim inaad iskaashi la samayso bixiyahaaga si loo abuuro qorshe daryeel cudurka neefta ah. Qorshahaaga daryeelka wuxuu u baahan yahay inuu tixgeliyo jadwalkaaga, sida aad u firfircoon tahay, asalkaaga dhaqameed, iyo dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee laga yaabo inaad qabto. Jadwal u samee jimicsiga joogtada ah oo qaado xasaasiyadda iyo dawooyinka xiiqda markay tahay. Haddii kale uma badna in qorshuhu ku habboon yahay noloshaada ama aad fahmi doonto waxaad u baahan tahay inaad sameyso. Raadi macluumaad dheeri ah iyo ilo kaa caawinaya maaraynta neeftaada.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 3, 2019